यस्तो छ फेसबुकका मालिक जुकरबर्गको दाम्पत्य जीवन – ईमेची डटकम
फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गको दाम्पत्य कस्तो होला ? व्यस्त दिनचर्याका बीच उनले आफ्ना परिवारसँग कसरी समय साझेदारी गर्छन् होला ?
यतिबेला उनी एक सन्तानका पितासमेत भइसकेका छन् । मार्क र चिनियाँ मूलकी अमेरिकी प्रिशिला चान २०१२ मे १९ मा विवाह गरेका हुन् । विवाहअघि उनीहरू लिभ इन रिलेसनसिपमा थिए । उनीहरूको विवाह अप्रत्यासित रूपमा भएको थियो ।
मार्क र चानले आफन्त तथा चिने जानेकालाई घरमा निम्त्याएका थिए । त्यसबेला प्रिशिला चानले भर्खरै मेडिकल ग्राजुएसन पूरा गरेकी थिइन् । निम्तालुले ठाने, ‘सायद चानको ग्राजुएसन पार्टी हो ।’
तर, आगन्तुकलाई आश्चर्यमा पार्दै मार्क र चानले विवाहको घोषणा गरे ।
उनीहरूको लभ स्टोरी साधरण छ । यद्यपि यतिमै यो लभ स्टोरी सकिँदैन । विवाहपछि पनि उनीहरूको लभस्टोरी अझ घतलाग्दो छ ।
विवाहअघि यस्तो नियम
प्रिशिला चानलाई थाहा थियो, मार्कको पहिलो प्रेम फेसबुकसँग नै छ । यदि उनलाई छुट दिइयो भने सम्पूर्ण दिन फेसबुकमै व्यतीत गर्नेछन् । त्यसैले प्रिशिला जब २००७ मा सन फ्रान्सिकोमा बस्न सुरु गरिन्, उनले प्रेमका केही नियम बनाइन् । त्यसमा एक नियम यस्तो थियो, उनले हप्तामा एकपटक कम्तीमा १ सय मिनेट एकान्तमा बिताउने । र, यो समय फेसबुकको कार्यलयभन्दा बाहिर हुनुपर्छ । प्रिशिलाले यो पनि नियम बनाएकी थिइन्, हरेक हप्ता एक पटक दुबै डेटमा पनि जानुपर्छ ।
प्रिशिला र मार्कबीच मित्रता गाँसिएको धेरै अगाडि हो । उनीहरूबीच चिनजान भएको १४ वर्ष पुगिसक्यो । २००३ मा प्रिशिला र मार्कको जम्काभेट भएको थियो, एक पार्टीमा । उनीहरू बाथरुम जाने पंक्तिमा उभिएका थिए । त्यही बेला प्रिशिलाले ठम्याएकी थिइन्, मार्क कम्प्युटरका किरा हुन् । उनी चौबिसै घण्टा कम्प्युटरमा हराउन सक्छन् ।
फेसबुकका पुराना प्रयोगकर्ता
प्रिशिला फेसबुकमा धेरै अगाडिदेखि जोडिएकी थिइन् । उनले ५ फेब्रुअरी २००४ मा फेसबुक अकाउन्ट खोलेकी थिइन् ।
प्रिशिला चानले २००७ मा हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट ग्राजुएसन गरिन् । यस समारोहमा मार्क पनि उपस्थित थिए । त्यसपछि प्रिशिला क्यालिफोर्निया सिफ्ट भइन् । त्यहाँ उनी मेडिकलको पढाइ पूरा गर्न थालिन् । उनले गोल्डेन गेटनजिकै एक अपार्टमेन्ट भाडामा लिएकी थिइन् । सप्ताहन्त मार्क त्यहीँ पुग्थे । उनीहरू हातमा हात समातेर पार्क घुम्थे, नौका विहार गर्थे, कहिलेकाहीं भिन्दाभिन्दै नौकामा बसेर रेस पनि गर्थे । प्रिशिला चिनियाँ मूलकी भएकीले मार्क पनि आइतबार उनीसँग एसियाली परिकार खान्छन् ।
फेसबुक बेच्नबाट बचाइन्
प्रिशिलाले हरेक कदममा मार्कलाई साथ दिँदै आएकी छन् । यसबीचमा मार्कको जीवन निकै तनावपूर्ण पनि रह्यो । त्यसबेला प्रिशिलाले दह्रो आड भरोसा दिइन् । २००६ मा फेसबुक खरिद गर्न कसैले प्रयास गरेका थिए । याहुले त्यसबेला एक अर्ब डलरको अफरसमेत दिएको थियो । मार्कका लागि त्यसबेला निकै तनावपूर्ण र द्विविधाग्रस्त समय थियो । प्रिशिलाले उनीसँग लामो कुराकानी गरिन् । यसपछि उनले सबै अफर छाडे र फेसबुक बिक्री गर्ने सोच बदले ।